Banyere Anyị - Shanghai Huitian New Materials Co., Ltd.
Huitian bụ ọkachamara nrapado na ihe ọhụrụ R&D emeputa, elu na nkà na ụzụ ọhụrụ enterprise otu, na ngwaahịa koodu 300041.
O nwere ntọala anọ na Shanghai, Jiangsu, Guangdong, Hubei, na-akwado ụlọ ọrụ akwụkwọ ikike akwụkwọ akụkọ bụ "BONDING". Ọ bụ ISO9001, ISO / TS16949, na ISO14001 gbaara ya.
Ngwaahịa ya enwetala SGS, TUV, JET, CQC, GL, JG, UL, DIN, NSF, FDA, LFGB, API certifications.
Huitian aghọwo ndị kasị ibu Chinese nyagide soplaya ọhụrụ ume, electronic, akpakanamde, ụlọ ọrụ, nkwakọ ngwaahịa, gburugburu ebe obibi-echebe, ewu, elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè.
Huitian hiwere na 1977, onye bu ya ụzọ bụ ndị mbụ anụ ụlọ na nyocha ụlọ ọrụ na-etinye na nrapado nyocha na mmepe. Ọ bụkwa usoro izizi nke ụlọ ọrụ nyocha mba nke na-atụgharị na ụlọ ọrụ na-ere ahịa, dịka otu n'ime ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ.
A mara Huitian dị ka steeti post-dọkịta ụlọ ọrụ isi na mba post-dọkịta na sayensị nnyocha center.
Na 2012, na - ejikọ Chinese Academy of Sciences, Huitian guzobere 'CAS bara kemịkal dị elu na-agbakwunye R&D', na-achọ na ọkwa mbụ nke ụwa R&D.
Chọ mmepe mmepe maka mmadụ niile!
Iji bụrụ onye ndu, anyị na-enye ndị ọkachamara, usoro, ezigbo adhesives ngwọta.
Nmeputa ohuru na sayensị na teknụzụ, mee ka ụlọ ọrụ ka mma;
Nlekọta maka mma Chemical, ka mma ndụ ndị mmadụ kwa ụbọchị.
Anyị ji ahịa-centric kpọrọ ihe;
Anyị na-akwado ndị ọrụ raara onwe ha nye;
Anyị na-akwalite arụmọrụ ego na-adigide;
Anyị na-arụ ọrụ mmekọrịta dị mma, wee baara obodo uru.
Onye isi oche otu 、 Secretary nke otu kọmitii Feng Zhang
12th na 13th National People Congress, agadi Economist, Executive director nke China adhesives mkpakọrịta, osote onyeisi oche nke hubei n'ógbè Federation nke ụlọ ọrụ na azụmahịa, China pụtara ìhè sayensị na nkà na ụzụ onwe oru buu igba n'ulo, Chinese ọrụ ebere ọnụ ọgụgụ, May Day oru mmeri ...
Mgbe ihe karịrị afọ 40 nke unremitting mgba na ịrụsi ọrụ ike, na-ewere elu-ọsọ ụgbọ oloko nke mba rejuvenation, huitain malitere ya azụmahịa si a obere-maara obodo nnyocha sayensị Institute, na nke nta nke nta na-eto n'ime a elu-tech enterprise otu na ụlọ ọrụ gafee Shanghai , guangdong, jiangsu na hubei, yanakwa akara ahọpụtara dị elu nke ngwa anya iji dochie mbubata. Were ọrụ, ka ndị ọrụ too, afọ ojuju ndị ahịa, ndị mmekọ na-emeri-mmeri, ndị nwe ọnụ ahịa bara uru, mmata mmekọrịta mmadụ na ibe ya, iji mepụta ọnụọgụ mmeri site n'ime ruo n'èzí, site na mgbago ugwu ruo na mmiri, nke a bụ huiten jidesie ike ka azụmahịa na nkà ihe ọmụma na uru pu rsuit! Huiten ga-ike elu-edu ngwaahịa na nsọpụrụ, ịta na kacha ịchụso tao, na-enweta nkwanye ùgwù maka ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na mba ke di ọku ahịa mpi ogbo, iji ghọta leapfrog development.
Mepụta Ngwaahịa Dị Elu
Elu nke World Huitian of China
Performancelọ ọrụ nrapado dị elu nke arụmọrụ - ihe ngwọta sara mbara
5 ụdị nrapado types2000 + ngwaahịa, iji gboo mkpa dị iche iche nke nrapado.
Akwa arụmọrụ silicone, polyurethane, acrylic, anaerobic, epoxy resin nrapado